Sidee la isku waafajin karaa nidaamka 4.5 iyo doorasho deegaan? +(Warbixin) – HalQaran.com
Sidee la isku waafajin karaa nidaamka 4.5 iyo doorasho deegaan? +(Warbixin)
June 30, 2020 July 2, 2020 Editor	0 Comments 4, 5, doorasho deegaan, Qabiil, Waafijinta
Muqdisho (Halqaran.com) – Baarlamaanka federaalka ee Somalia ayaa maanta ansixiyey xeerka astaynta kuraasta baarlamaanka federaalka. 144 xildhibaan ayaa ogolaaday, halka ay 4 mudane ka aamuseen, waxaana diiday 2 xildhibaan. xeerkan ayaa u dambeeyey dhowr xeer oo muhiim u ah qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliya.
Haddaba Kuraastan degaannada loo qaybiyey waa markii ugu horraysay ee la doonayo in la hirgaliyo qorshe noocaas ah oo looga gudbayo nidaamkii 4.5 ee saami qaybsiga qabaa’ilka ku dhisnaa. Ma yahay mid haddaba u cuntamaya qabaa’ilka oo ah halka ay siyaasiyiintu ka soo jeedaan, sideese la isugu jaangooyn karaa deegaan doorasho iyo saami qaybsiga 4.5?
Dr Cabdiwahaab Cabdisamad oo ka faaloodo arrimaha gobolka ayaa BBC u sheegay in xildhibaanada baarlamaanka laga soo doorto deegaanada ay kasoo jeedaan ay ka wanaagsan tahay nidaamkii saami qeybisga ahaa ee 4.5.
“Haddii kuraasta loo daadejiyo deegaanada wey fiican tahay…waxay ka wanaagsan tahay nidamkii odeyaasha inta ay fadhistaan ay qof keeni jireen ama in handdaad ay kooxaha hubeysan ku sameeyaan sidii loo soo xuli lahaa qofkii ay doonayeen” ayuu yiri Dr Cabdiwahaab.
Walaaca ka taagan arrintan
Haddaba, jahwareerka ku gedaamaan doorasho deegaan waxay tahay, in kuraastan lagu qeybsan doono qaab qabiil ama deegaan, sida uu sheegay Dr Cabdiwahaab.
“Mushkiladda jirta oo Soomaaliya hortaagan waa 4.5, haddii kuraasta lagu qeybsaday qaab qabiil waa gooni, laakin labo arrimood inay baarlamaanka kala caddeyaan ayaa muhiim ah, war kuraastan ma qaabiil ayaad ku heshiiseen mise qabiil baa iska leh misee qaab deegaan baa iska leh?
Waxaa uu u soo jeediyay dowladda in meesha ay ka saarto nidaamka saami qeybsiga qabiilka isla markaana la ambaqaado doorasho deegaan.
“Waxaan kula talin lahaa baarlamaanka inay mooshin keenaan oo ay ka takhalusaan nidaamka 4.5 oo aanan mar dambe wax lagu qeybsan 4.5 oo deegaan wax lagu qeybsanaayo”
Caqabadda ugu weyn ayaa noqon doontaa dhanka amniga gaar ahaan deegaanada ay Shabaab ka taliyaan oo laga muujinayo walaaca ah in doorashada kuraasta loo qondeeyay deegaanadaas lagu qaban doono meelo kale.
“Haddii xaalad adag ay jirto oo ay xaaladdaas aanay saamaxeynin in meeshaa ay doorasho ka dhacdo baarlamaanka, dowladda iyo guddiga doorashada ay ka fakiraan qaabka ugu fiicaan ee doorasho uga dhici karto deegaankaas, haddii kursiga ay keenaan meel amni ah ay ku tartamaan dadka deegaanka u dhashay waa in aysan ka imaan deegaan kale”
← Madaxweyne Farmaajo oo Xariga ka jaray Garoonka Kubadda Cagta ee Stadium Muqdisho +(SAWIRRO)
Sida looga xusay munaasabadda 1-da Luuyo Muqdisho & Gobollada dalka +(SAWIRRO) →
May 28, 2020 May 28, 2020 HalQaran Staff 1
Madaxweynaha Galmudug ‘Xaaf’ oo dalbaday in la joojiyo howlaha ka socda Dhuusamareeb +War-Saxaafadeed
January 23, 2020 January 23, 2020 Weriye Ahmed Abdi 0
July 11, 2019 July 13, 2019 Weriye Ahmed Abdi 0